Ndụmọdụ iji chekwaa ego na mbupu | ECommerce ozi ọma
Zọpụta ego na mbupu: debanye aha na izipu ozi. Obi abụọ adịghị ya na iguzosi ike n'ihe na ụlọ ọrụ ndị njem a nwere ike ịbụ ezigbo ihe nchekwa ego maka mmepe nke ọrụ ndị a. Ga-dịkarịa ala na-agbalị ya n'ihi na ya pụta pụrụ ịbụ nnọọ ikpọ site ndị a kpọmkwem oge. Na njedebe nke ubochi obu ihe ichoro oru ndia na mbu. Maka na obere azụmaahịa na-ebubata ihe oge niile, jiri mmemme azụmaahịa rite uru.
Ka ị na-akwụkwu ụgwọ na mbupu kwa ọnwa, ka ị ga-echekwa. Enweghị ihe kpatara ị ga-eji kwụọ ọnụahịa mkpọsa mgbe ị na-ebufe nnukwu olu. Mbelata na-akwụ ụgwọ pụrụ ịbụ nnọọ nnukwu na ọbụna obibia etoju nke ihe ruru 40% karịrị ụgwọ mbụ ya.
N'ezie, ị ga-enwe akaụntụ ndị ahịa nke na-enye gị ohere ịmepụta atụmatụ a iji zipu ngwaahịa gị na isiokwu nye ndị ahịa gị ma ọ bụ ndị ọrụ gị site ugbu a gaa n'ihu.
1 Họrọ nkwakọ ngwaahịa zuru oke maka ngwaahịa gị
2 Jiri ụfọdụ atụmanya kwadebe ya
3 Wepụta oge na usoro ndị a
4 Mgbochi n'oge pụrụ iche
5 Mee Ndepụta Mbukota na mbupu mba ofesi
6 Họrọ nkwakọ ngwaahịa kwesịrị ekwesị
7 Gịnị mere o ji dị mkpa ịchekwa?
Họrọ nkwakọ ngwaahịa zuru oke maka ngwaahịa gị
Usoro ọzọ ị nwere ike iji ugbu a bụ nke metụtara nha nke mbupu n'onwe ha. N’echiche, ị ga-emerịrị gbanwee na nha nke ngwa ahia ma obu ihe ichoro izigara ndi ahia gi. N'ihi na na njedebe nke ụbọchị, ihe ịga nke ọma nke arụmọrụ ahụ dabere n'eziokwu na nkwakọ ngwaahịa adịghị efu. Nke a bụ nkwụsị nke a na-eme mgbe niile yana nke ahụ ga-emebi nnukwu ego n'ime afọ.
Nnukwu igbe gị, otu a ka a ga-ebo gị ebubo, yabụ gbaa mbọ hụ na ị nwere igbe dị nso na nha mbufe dịka o kwere mee. Agbanyeghị na ọ na - adaba adaba mgbe ụfọdụ iji nnukwu igbe dị na nchekwa iji zipu ihe site na mail, ị ga - akwụ ụgwọ karịa ihe dị mkpa maka mma a. N'ezie, ọ bụrụ na itinye ndụmọdụ ndị a dị mfe ị nwere ike chekwaa ego kwa ọnwa na mgbe oge na-aga ị ga-achọpụta ya na akaụntụ nchekwa gị. Kedu nke bụ, ka emechara, ụdị ụdị arụmọrụ a pụrụ iche.
Jiri ụfọdụ atụmanya kwadebe ya
Nwere ike ọ maghị ya, mana na njedebe ma ọ bụrụ na ị nwere atụmatụ maka mbupu ihe, ị gaghị enwe obi ike mgbe ị malitere ịkwakọ ihe na ịkwadebe ha maka izipu gị. Debe ihe niile ị na-ezipụ ezigara, gụnyere igbe na ihe eji ebu ihe, aha mmado na teepu mbupu.
N'ezie, ịtụ iwu n'ụdị arụmọrụ a nwere ike ịnọchite anya ọtụtụ na ọtụtụ euro kwa afọ na ị nwere ike ịhụ belata ma ọ bụrụ na ịchọrọ maka atụmatụ azụmaahịa a. Ebe ọ na-ukwuu tụrụ aro na site ugbu a na i nwere gị niile ngwaahịa nke ọma nyere iwu nke mere na a dị mkpa usoro a kachasị na-echekwa ma ọ bụ online azụmahịa. Ọ bụ otu n'ime igodo iji nwee ihe ịga nke ọma na ụlọ ọrụ gị ma ọ ga-efu gị obere ihe iji mezuo ya na arụmọrụ na ọzụzụ. Ọ bara uru ịnwale, n'agbanyeghị ụdị e-commerce gị.
Wepụta oge na usoro ndị a
Ọ bụghị ihe niile ga-abata n'otu ụbọchị, n'ihi na ihe niile ga-adabere na mkpa nke ndị ọzọ bụ akụkụ nke usoro a dị oke mkpa na ụlọ ọrụ dijitalụ. Site na nke a, ọ dị ezigbo mkpa na site ugbu a gaa n’ihu ị ga-atụle ọsọ ọsọ ịchọrọ a na-ebunye ihe, yana ụgwọ nke arụmọrụ ndị a. Ebe mgbe ụfọdụ oge na-abụghị ihe kacha mkpa maka nhazi oge ya. Na mgbakwunye, ọ bụ atụmatụ ejiri mara nke mbụ na nke kachasị ọhụrụ ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ.
N'echiche a, ọ bụrụ na iziga akwụkwọ ngwa ngwa, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, ọ ga-adị ha mkpa ịbịaru echi ma ịkwesịrị iji ọrụ ozi ngwa ngwa ahụ. Ma ọ bụrụ na ọ bụ ngwaahịa, nke anaghị emebi emebi, onye nnata ya ga-enweta ya nke ọma na ụbọchị ole na ole, ka inwee ike iji ụgbọ njem ala. Otu akụkụ ị kwesịrị ịtụle bụ ịdị ngwa ma ọ bụ na ọ bụghị nke mbupu ndị a, ọkachasị maka njikarịcha ziri ezi nke arụmọrụ ndị a na njem mba ma ọ bụ na mpụga ala anyị.
Mgbochi n'oge pụrụ iche
Otu n'ime sistemụ ị nwere ike iji tinye atụmatụ a pụrụ iche pụrụ iche na ngosipụta ndị a. Na ọtụtụ ụbọchị na-enweghị nnyefe n'oge ezumike, yana naanị ihe idei mmiri nke ozi okporo ụzọỌ dị mkpa ịnwe usoro maka izipu ozi gị na ngwugwu gị ka ha rute tupu ezumike ahụ. A ga-egbochi oge ndị a n'afọ tupu oge eruo site na ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa dị n'ịntanetị. Site na nsonaazụ na-eju anya na nkwupụta ego gị na njedebe nke afọ ọ bụla.
N’aka nke ọzọ, echefula na ka oge na-adịghị anya ị na-eche, ka ị ga-akwụkwu ụgwọ maka ihe ndị a ga-ebuga gị n’oge. Ọ bụrụ na ị na-eziga ndị ahịa, ịnwere ike ịgafe ha nnukwu ego. Site na ụdị ọrụ a, jide n'aka na n'ikpeazụ ị ga-enwe ike belata mmefu site na 20% ma ọ bụ 30% na ọnụahịa mbụ ya. Ya mere, ọ bụ iwu maka ndị ọchụnta ego na mpaghara akụ na ụba a. Dị ka ha na-eme na ọnwa ndị na-adịbeghị anya na ebumnuche kachasị mkpa nke ịchekwa ụgwọ na ịkwalite ego na akaụntụ nchekwa nke ụlọ ọrụ ndị a.
Mee Ndepụta Mbukota na mbupu mba ofesi
Ihe mbu ị ga - eme bụ 'Ndepụta Mbupu', ndepụta nke kwesịrị ịkọwa ihe ọ bụla etinye na ngwugwu gị. Ọ bụ usoro iwu amanyere na ị kwesịrị ilebara ya anya pụrụ iche. N'echiche a, a ghaghị imesi ya ike na nkwadebe nke mbupu gị dị mkpa. Ọ bụ usoro na-amalite na arọ ngụkọta oge na nha nke ngwugwu gị, n'ihi na dabere na ndị a, ọnụahịa ga-adị iche. Na ụfọdụ iche na udu na dị nnọọ elu na nke ahụ nwere ike ibute divergences nke ruo 35% ụfọdụ.
Họrọ nkwakọ ngwaahịa kwesịrị ekwesị
N'aka nke ozo, i ghaghi iche site ugbua gawa na ihe nkwuputa kwesiri ekwesi zuru oke dikwa mkpa iji kpuchita ahia ahia gi site na otiti. Jide n'aka na ihe gị juputara nke ọma, kaa akara ma chekwaa ya na ngwongwo zuru ezu na ihe nkwado iji gbochie ha emerụ n'ụzọ. N'ụzọ dị otú a, ị ga-ezere ụjọ na-enweghị isi na ihe dị mkpa karịa, na ị nwere ike imefu ego na-enweghị isi n'ụdị arụmọrụ a na mbupu ngwaahịa gị ma ọ bụ isiokwu gị.
Dị ka eziokwu ahụ na ọ gaghị ekwe omume izipu ụdị ngwaahịa ọ bụla, ebe ọ bụ na enwere mgbochi na nke a. Ọ bụrụ na mbupu gị nwere ngwa ahịa na-enwetaghị ikike, mkpuchi agaghị ekpuchi mkpuchi gị. Maka nke a, ị gaghị enwe ngwọta ọzọ karịa ịjụ ndepụta nke ngwaahịa ma ọ bụ ihe amachibidoro iji gosipụta ma mbupu gị kwekọrọ na ndị kwesịrị ekwesị. Ọ bụ otu n'ime atụmatụ kachasị ike iji chekwaa ego na klas a nke ọrụ ndị ọkachamara na ọ gaghị ewe nnukwu mbọ iji tinye ya n'ọrụ. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, otu ebumnuche kachasị mkpa maka akụkụ buru ibu nke ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ bụ ịnata iwu ha n'ụzọ dị nchebe.
Gịnị mere o ji dị mkpa ịchekwa?
Ndị ọrụ ga-atụgharị uche n'ọnọdụ dị egwu ebe, mgbe oge nke mmụba akụ na ụba, ha ga-ahọrọ ngwaahịa nke na-enye ohere belata akwụ ụgwọ nke klas a nke mbupu nke ngwaahịa ma ọ bụ isiokwu gị. Ọ bụ ezie na oge nsogbu akụ na ụba ọ ga-akacha mma iji bulie ọrụ ọkachamara a ka o wee nwee nnukwu nchekwa na ego maka isi obodo etinye ego na azụmaahịa gị.
Enwere ike ibute klaasị nke ngwaahịa a site na ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa dị n'ịntanetị, nke ka na-abụkarị ndekọ ego nke ụlọ ọrụ ndị a, na-enweghị uru pụtara nke ọma, mana nke na-enye ndị ọrụ obere uru dị ka ịkwụ ụgwọ ụgwọ ego ha ma ọ bụ na ha agaghị akwụ ụgwọ mmezi mmezi.
Etinye ego bụ ụzọ kachasị mma iji wee chekwaa ego anyị, mana yana ihe egwu na isi obodo nwekwara ike ibelata, na-atụle a onyinye zuru ezu ebe ọ bụ na ọ ga-ekwe omume ịrụ ọrụ na klaasị dị iche iche nke ụlọ ọrụ nwere njirimara ndị a. Na uru na i nwere otu nke kasị mma na-enye na e mepụtara na-adịbeghị anya. Dịka ọ bụ azụmahịa na-agbasawanye nke ọma, ọ bụ n'ihi nzụlite nke azụmahịa kọmputa.
Chekwa di nkpa maka mgbe inweta ihe oma ma obu nke ndi ahia di nma. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na n'etiti ndị ọrụ, echiche nke imeju ọchịchọ anụ ahụ ha site na usoro a dị ọnụ ala na-adịgide. N'ezie, enwere ike idozi nsogbu a site na inye ego mgbazinye nke onwe ma ọ bụ nke ndị na-azụ ahịa nke nwere ike ịkwalite onye ọrụ ihe ruru euro 50.000 karịa, ọ bụ ezie na itinye ọmụrụ nwa nke dịgasị iche dabere na ngwaahịa ọ bụla, mana nke ahụ gụnyere n'etiti 6% na 9. % odika Otu n'ime ebumnuche kachasị chọọ site n'akụkụ dị mma nke ndị ahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Ngwaọrụ » Ndụmọdụ iji chekwaa ego na mbupu
Kedu ihe bụ onye isi ọrụ na ihe bụ ọrụ ya na ụlọ ọrụ?